सामाजिक संजालबाट अरुलाई दुख दिने बानी छ ? - Vishwa News
सामाजिक संजालबाट अरुलाई दुख दिने बानी छ ?
काठमाडौं । सामाजिक संजाल (फेसबुक, टुइटर, इन्स्टा, भाइबरलगायत) प्रयोग गरी अरुलाई सताउने बानी छ ? या त्यस्तो काम गर्नेहरुबाट तपाई पिडित हुनुहुन्छ ?
अब सामाजिक संजालबाट हुने सबै प्रकारका हानी नोक्सानीमा कारवाही हुने गरी कानून बन्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन बहुमतबाट पारित गरेको छ ।
विधेयकमा कांग्रेस सांसद बहादुर सिंह लामा असहमति रहे । प्रतिवेदन अनुसार विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई हैरान बनाउने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहीत गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउने काम गर्यो भने त्यस्तो काम दण्डनीय हुने भएको छ ।
अब सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता भएपछि मात्र देशभित्र आफ्नो सेवा प्रवाह गर्न सक्नेछ । सामाजिक संजालका माध्यमाट घृणा, द्वेष वा अपहेना उत्पन्न हुने काम गरेपनि कारबाहीको भागिदार हुने गरी कानून निर्माण गरिदैछ ।
उपसमितिले प्रतिवेदन पूर्ण समितिमा पठाउने तयारी गरेको छ ।
हिमेश पन्त बने कमेडी च्याम्पियन
गच्छदार समूहका दर्जन नेता बने कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य
हङकङमा कोरोनाले लियो दोस्रो व्यक्तिको ज्यान
बाइडेनले पुर्याए डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतिय टिकटका लागि चाहिने प्रतिनिधी
लकडाउनबारे सरकार अझै अलमलमा, आइतबार के प्रस्ताव जाँदैछ मन्त्रिपरिषद्
कांग्रेसले भन्यो : विदेशबाट आउन चाहने सबैलाई घर ल्याउ
नेपालमा कोरोनाका कारण थप २ जनाको मृत्यु
नेपालमा एकै दिन थपिए ३२३ संक्रमित, ३२३५ पुगे संक्रमित
महामारीका बीच पाकिस्तानले खुलाउने भयो लकडाउन
नेपाललगायत मुलुकले खेल्ने विश्वकप छनोटका खेल ४ महिनापछि गराउने प्रस्ताव
डोल्पामा ५ दिन अगाडी मृत्यु भएका व्यक्तिमा कोरोना पुष्टी
शनिबार पनि देशका धेरै स्थानमा दिनभर वर्षा हुने
डिभी २०२१ को नतिजा आज सार्वजनिक हुने
प्रदर्शनकारीलाई समातेर दश बर्ष जेल हाल्न गभर्नरहरुलाई राष्ट्रपति ट्रम्पको सुझाव